Magaalada Cadceedda Koowaad ee Mareykanka, Babcock Ranch | Cusbooneysiinta Cagaaran
Magaalada Cadceedda Koowaad ee Mareykanka, Babcock Ranch
Daniel Palomino | | Ecology, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Hoyga Cagaaran
Beerta Badcok, gudaha Mareykanka, halkudhigga ah "Dhammaan magaalooyinku ma siman yihiin" waa magaalada ugu horeysay maxay iska dhigaysaa ku shaqeeya tamarta qoraxda 100% ee awoodeeda.
Ma noqon kartaa magaalada qoraxda in badan oo naga mid ahi u ooman?
Sida ku xusan mashruuca, waxa ugu nabdoon ayaa ah in haddii lagu guuleysto, lagu daro Badcok Ranch kuma tiirsana kaliya inay tahay magaalo qorrax leh iyo wax kale maahee taas ayaa noqon doonta magaalada ugu fiican socodka ama baaskiil wadista, ayaa yidhi Kitson & Partners, oo ah hay'ad guryaha dhista oo kobcisa mashruucan koonfur-galbeed Florida.
Sababaha loo istcimaali karo inay tahay magaalada qoraxda ugu horeysa ama sidoo kale looyaqaano magaalada waarta lama waayi karo waana taas Florida Power iyo Light, shirkadda iskaashiga ee leh taageerada Gobolka Florida iyo Gobolka, wuxuu dhisi doonaa warshad cadceedda ku shaqeysa aagga aad u malaynayso keen 19.500 oo guri ee magaalada.
Warshaddan qoraxda, oo leh ilaa 75 MW oo tamar ah, oo u dhiganta a rakibidda 340.000 oo baallayaasha ku shaqeeya cadceedda, waxay siin doonaan tamarta lagama maarmaanka ah maalintii oo dhan Babcock Ranch.
Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro maalmo daruuro ama habeenno, magaaladu waa inay keydisaa gaas dabiici ah. Waxaan horey u ogaa inay jirto bisad halkaan kuxiran!
Sida laga soo xigtay dhiirrigeliyeyaasha, isticmaalka gaaska dabiiciga ah inta lagu jiro maalmaha daruuraha iyo saacadaha habeenkii waxay noqon doontaa qiyaas ku meel gaar ah, Maaddaama ay rajeynayaan in Babcock Ranch uu noqon doono nooc ka mid ah magaalooyinka "sheybaarka" nolosha dhabta ah si ay u awoodaan hormariyo horumarka cilmi baarista sida tusaale ahaan keydinta tamarta qoraxda.
Qodob kale oo lagu xisaabtamayo magaaladan qorraxda leh ee dammaanad qaadaysa in la siiyo "nolol gebi ahaanba waarta" ayaa ah firfircoonida tamarta guryaha, oo bixiya darbiyada kuleylka kuleylka, oo la caddeeyey dabcan, Florida Green Building Coalitio.
Gelinta tamarta la cusboonaysiin karo maahan xalka kaliya hadii aadan gadaal ka ogeyn sida looga faa'iideysto tamarta ama xaalada ugu xun ha "baxsato".
3 Ka hortaga
Hadda, haddii aan dibedda ka eegno gudaha waxaan dhihi karnaa tan magaalada qoraxda waxay leedahay in kabadan 80 km raadadka dabiiciga ah, oo lagu daray a jardiinooyinka bulshada iyada oo loo marayo xaafadaha iyo dariiqyada u dhow, sidaas awgeedna kor loogu qaadayo isdhexgalka deriska, mid kale oo ka mid ah walxaha aan la qarin karin ee Babcock Ranch warqaddiisa daboolka ah.
Taasi waxay tidhi, gudaha ee magaaladu waxay xooga saari doontaa qaabka muusiga aasaasaha kaas oo dabooli doona dhammaan baahiyaha dadka deggan laga bilaabo bartamaha magaalada (faras-magaalaha) oo yeelan doona makhaayado, kafateeriyada, dukaamo iyo goobo madadaalo iyo Wi-Fi bilaash ah.
Isticmaalka baaskiil inkasta oo ay waliba suurto gal noqon doonto in tiro badan la helo dhibco dib u soo celinta si kor loogu qaado gawaarida korontada.
Sida for gaadiidka dadweynaha waa inaad ka qaadataa xoogaa mala-awaal ah filimaanta sheekooyinka sayniska ah maadaama ay ku shaqeynayaan koronto, illaa iyo hadda waa hagaagsan tahay, laakiin waxay noqon doonaan kuwo is-madax-bannaan oo aan darawal lahayn.
Wax walba oo magaalada qoraxda ku yaal maaha wax rogaan ah, South Florida Widlands wadajirka ah wuxuu ka soo horjeedaa magaalada mustaqbalka sababo aad loo difaaci karo tan iyo markii dhismuhu wuxuu saameyn ku yeelan doonaa masaska, orso madow, deegaannada panther iyo qoryaha xira kuwaas oo degan agagaarka.
Dhiirrigeliyeyaashu way isdifaacaan iyagoo hubinaya taas ugu yaraan 295 km2 waa la ilaashan doonaa waxayna magaaladu camiran doontaa wax kayar 73 km2 taas oo Koonfurta Florida Widlands ay ka soo horjeedo fikradda ah mashruucu wuxuu saameyn ku yeelan doonaa agagaaraha xarumaha cusub ee wax iibsiga iyo tas-hiilaadka kale, iyagoo sheegay inay xitaa ka dhigi doonaan meelaha ku dhow dhow kuwo nugul markay gaaraan gees panthers ah, ayaa laga helay Khatarta baabi'inta.
Halka dhaliisha mucaaradka iyo dhiirrigeliyeyaashu ay isdifaacayaan, "roobku waa da'ayaa" magaaladu waxay kusii socotaa dhismaheeda mar dhowna waa suurtogal in jaar la ahaato beeshan inta jeebkaaga ku jirtaa kudhowaad $ 300.000 - $ 750.000.
Tani waa markay soo gasho jahwareerka in ilaaliye kasta, cilmiga bey'ada, aqoonyahan cilmiga deegaanka ama qof walboo ka walwalsan deegaanka uu leeyahay.
Burburi qayb ka mid ah nidaamka deegaanka oo leh dhammaan dhibaatooyinka ay tani u leedahay dhismaha magaalada waarta si loo ilaaliyo deegaanka.
Ma wax yar ayaan u hurnaa "danta guud" mise waan iska taagnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » Magaalada Cadceedda Koowaad ee Mareykanka, Babcock Ranch
Waxa gaaska dabiiciga ahi wuxuu noqon lahaa ganacsiga kale. Waa maxay macluumaadka wanaagsan, boostada wanaagsan.
Aad baad u mahadsantahay Osmar, waa farxad inaan kugu wargaliyo wixii war ah ee ka soo baxa tamarta la cusboonaysiin karo.
Jawaab ku bixi Daniel Palomino
Waa qalad weyn oo Wasaaradda ah inay wajahdo tikniyoolajiyadda dib loo cusboonaysiin karo ee xaraashka ah
Maalinta Baaskiilka Adduunka